Isikhumbuzo sosuku olumnandi, umthwalo onamavili! -Iindaba-Phu Ly Bao Co. Ltd.
Usuku olumnandi, imithwalo enamavili!
Amavili kwisutikheyisi? Ukulungeleka kakhulu, zibaluleke kakhulu kumhambi wanamhlanje. Kodwa ngo-1970, uBernard Sadow wayenengxaki ekuthengiseni umbono wakhe ojikelezayo wesutikheyisi.
“Ndayibonisa zonke iivenkile zesebe kwisiXeko saseNew York kunye nee-ofisi ezininzi zokuthenga, kwaye wonke umntu wathi ndiyaphambana. 'Akukho mntu uza kutsala isiqwenga somthwalo esinamavili kuso.' Abantu khange bacinge ngaloo miqathango, ”utshilo uSadow.
USadow, 85, waphefumlelwa kwiminyaka engama-40 eyadlulayo xa wayehamba ngesiko kwisikhululo seenqwelomoya ePuerto Rico, xa ebuya e-Aruba nenkosikazi yakhe nabantwana.
Wayesilwa neesutikheyisi ezimbini ezinkulu, ezipakishwe ngokuqinileyo ezingama-intshi ezingama-27, ngaphandle kwesibuko, xa wabona indoda ihambisa isiqwenga somatshini kwiqonga elinamavili.
“Wayenomatshini, kwaye wayewutyhala ngaphandle komzamo omkhulu, ndathi kumfazi wam, 'Yile nto siyifunayo! Sifuna amavili kwimithwalo. ' ”
USadow wayekwishishini lempahla kwaye wayengumongameli wangaphambili kunye nomnini we-US Luggage, ngoku eyinxalenye yeBriggs kunye neRiley Travelware.
Wancamathisela ii-casters ezine, ezinjengezo zisetyenziswe embokweni, ezantsi kwesutikheyisi wongeza umtya oguqukayo, waya kurhwebo, ehamba nesutkheyisi esemva kwakhe.
Emva kweeveki zokwaliwa kwiivenkile zesebe, kubandakanya zikaMacy, uSadow wayenentlanganiso nosekela Mongameli kaMacy owayechukumisekile ngumbono wakhe.
Umthengi kaMacy owayesandula ukumbonisa umnyango wavumelana nomphathi wakhe, kwaye imveliso yazalwa. USadow ufake isicelo selungelo elilodwa lomenzi wase-US ngo-1970, kwathi ngo-1972 wanikwa ilungelo lokuqala lobunikazi elinempumelelo kwiityesi ezinamavili. UMacy wathengisa iisutikheyisi zokuqala ngo-Okthobha u-1970.
I-Sadow ibambe i-patent kangangeminyaka emibini de okhuphisana nabo badibana kwaye bayaphula le patent, bevula imakethi kwimithwalo enamavili.
Kuyavunywa, ezo sutikheyisi zokuqala ezinamavili zazilungile, zingenamandla. Ukuhamba-hamba kunye nokuthimba kwakuyingxaki kubahambi abatsala iisutikheyisi ezinkulu ezinamavili afakwe emazantsi emxinwa.
Kuthathe phantse iminyaka engama-20 ukuqhubela phambili ngokulandelayo kwimithwalo eqengqelekayo.
Ukutsalwa kumavili amabini ngesiphatho esirhoxiswayo, imeko yanamhlanje isutikheyisi emnyama yaqulunqwa ngasekupheleni kweminyaka yama-80s ngumqhubi wenqwelo moya waseMntla Ntshona uBob Plath. "I-Rollaboard" yakhe yayikukuqala kwenkampani yemithwalo iTravelpro.
Kodwa amavili eza kuqala, kwaye imithwalo eyayilandelayo itshintshe indlela abantu abahamba ngayo. Ngaba ukubeka ivili kwisutikheyisi yeyona nto wayeyifuna?
“Ngomnye wabo,” watsho, ehleka.